IOS र6आइओएस विकास को समीक्षा। स्मार्टफोन लागि सञ्चालन प्रणाली
कम्प्युटर, अपरेटिङ सिस्टम
एप्पल देखि उत्पादन गुणस्तर र विकास गर्न अति सावधान दृष्टिकोण उदाहरणको रूपमा विश्वव्यापी ज्ञात छ। मोबाइल र डेस्कटप दुवै: धेरै अर्थमा, यो प्रतिष्ठा विशेष उच्च-गुणवत्ता सञ्चालन प्रणाली कारण हो। टाढा द्वारा सबैभन्दा चिरपरिचित संस्करण यो कम्पनी skveformizma नीति adhering गरिएको छ जो पछिल्लो थियो देखि, iOS6छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि ओएस, धेरै विशेषज्ञहरु अनुसार, सबैभन्दा अनुकूलित छ, किनभने उनको यो प्रयोग गर्नुहोस्।
यो पहिलो 2012 मा सार्वजनिक देखाइएको थियो। छिट्टै यो अघि, विकासकर्ताहरूले तिनीहरूले नयाँ वास्तविकताहरु आफ्नो आवेदन अनुकूल सकून् भनेर iOS6को एक प्रारम्भिक संस्करण, प्रदान गरिएको छ छ। यसलाई त्यसैले यसलाई सम्भव थिएन पुरानो उपकरणहरूमा iOS6स्थापना गर्न कसरी, ब्रान्ड को धेरै प्रशंसक नयाँ उपकरण खरीद लागि बाहिर खोल गर्न थियो iPhone5गर्न आईफोन 3GS को मोडेल मा काम गर्छ।
यसको समय (र विशेष आजको लागि) यस्तो नीति निर्माता पूर्ण अनुमोदन योग्य हुनुहुन्छ। यो जारी समर्थन बिना र OS अपग्रेड बिना बसे पछि आधा एक वर्ष पहिले नै छ "एन्ड्रोइड" मा नयाँ flagships, को इतिहास सम्झँदा लायक छ। आज हामी यसको predecessors देखि नयाँ अपरेटिङ सिस्टम भेद कि सुविधाहरूको बारेमा कुरा।
तुरुन्त हामी संग नयाँ प्रणाली iOS6मा pullback छलफल हुनेछ चेतावनी दिए। यस्तो सम्भावना एकदम केहि समय को लागि एप्पल द्वारा अवरुद्ध गरिएको थियो भन्ने तथ्यलाई। को पाठ्यक्रम, तपाईं "अनौपचारिक" तरिका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं तुरुन्त आफ्नो उपकरणमा कुनै पनि ग्यारेन्टी गुमाउनु हुनेछ यो मामला मा, र एक "ईटा" यसलाई खोल्दै को मामला मा त्यहाँ आधिकारिक सेवाहरू आफ्नो समस्या सामना गर्नेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
सिरी अब धेरै थाह छ, तर समय भर्चुअल सहायक थाह गर्न सकिनँ 4S र माथि आईफोन मात्र खुसी मालिक। सुविधा iOS6मा "सिरी" नयाँ अवसर थियो - अब आफ्नो सबै कार्यक्रम तपाईं आदेशहरू आवाज तिनीहरूलाई पैदा चलाउन सक्छ। त्यसपछि फेसबुक र ट्विटर मा आफ्नो खाता व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता थपियो। दुर्भाग्यवश, सबैभन्दा आधुनिक iOS9रूसी प्रयोगकर्ताहरूको लागि यति आकर्षक छ मा पनि "बन्स" प्रदान छैन।
देखि संग नै भर्चुअल सहायक पेशेवर खेल संसारमा बाट नवीनतम समाचार सुझाव गर्न सक्षम छ। तथापि, घरेलू प्रयोगकर्ताहरूको लागि बेसबल वा बास्केटबल को दुनिया को घटना बरु, केवल अमेरिका रोचक छ किनभने जान्न, अझै पनि असान्दर्भिक छ। सिरी को रेकर्ड आयोजित खेल बारे जानकारी, व्यक्तिगत खेलाडीको प्रदर्शन प्रदान गर्न सक्छन्।
रोटी र circuses प्रेमीहरूलाई लागि
अन्तमा, "सिरी" सिनेमा प्रेमीहरूको सबै सम्भव सहायता प्रदान गर्न सक्छन्। तर, एउटा सानो टिप्पणी छ: सबै लाभ उपलब्ध फेरि सबै प्रयोगकर्ताहरू, तर केवल सबै भन्दा प्रसिद्ध "सिरी" सिनेमाहरू को क्षेत्र "दृष्टि लाइन" मा भएकाहरूलाई मात्र। यस मामला मा, तपाईं यसलाई प्ले गर्ने अभिनेता सहित अर्को सत्र, फिल्म बारेमा इलस्ट्रेटेड विवरण प्रत्येक, को अनुसूची जाँच गर्न सक्छन्। Connoisseurs पनि हरेक उपलब्ध तस्वीर को विस्तृत समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। र "सिरी" फिल्म, जो तपाईं को लागि प्रतीक्षा गरिएको छ बक्समा को उपस्थिति को प्रीमियर को पनि मिति शीघ्र गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं रेस्टुरेन्ट को एक भावुक प्रशंसक छन् भने, स्मार्ट कार्यक्रम तपाईं यस मामला मा मदत गर्नेछ। त्यसैले, तपाईं बस उनको, जहाँ, उदाहरणका लागि, निकटतम सभ्य चिनियाँ, छ "खानपान", र पनि बाहिर बस्ने संग अनुरोध गर्न सक्छ। भन्ने नसक्ने हो भने, सहायक तपाईं यसको बारेमा भन्नेछु। तपाईं पनि हालको मेनु पत्ता लगाउन र ग्राहक समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं पूर्णतया अवस्था सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पनि तालिका तुरुन्तै, "स्पट मा" आरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य लाभ र बेफाइदा
तपाईं शायद अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै उपलब्ध मात्र विदेशी देशहरूमा वसोवास गर्न, रूप पनि एक रूसी गर्न "सिरी" को नयाँ संस्करण छ र हुर्किसकेका छैन, र हाम्रो देश रिमोट जगेडा टेबल संग खुले हावा रेस्टुरेन्ट धेरै केही छन्। तर, केही अवस्थामा, त्यहाँ अझै पनि यस प्रकारको को निकटतम संस्थाहरू बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने मौका छ। खैर, र धन्यवाद छ।
अन्तमा, iOS6देखि, स्मार्टफोन इन्टरफेस प्रविधि र प्रदान गर्ने जहाजमा कम्प्युटर कार को, को पाङ्ग्रा पछि ड्राइभर आफ्नो फोन गरेर विचलित अरूको जीवन, छैन jeopardize अनुमति दिन्छ। तपाईं बस स्टीयरिंग स्तम्भ मा बटन poke र "सिरी" निर्देशन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन पनि ट्रंक मा झूठ हुन सक्छ। निस्सन्देह, यो सबै मात्र सबैभन्दा "चतुर" पश्चिमी Automakers को मोडेल लागू हुन्छ। यो समारोह संग, तपाईं, कल गर्न सक्छन् एसएमएस पठाउन र सुन्न, दायाँ मार्ग सोध्न वा संगीत प्लेब्याक नियन्त्रण गर्नुहोस्।
ठाउँ र यात्रा को परिवर्तन को प्रशंसक
लागि पहिलो पटक गुगल निगम बिना काम एक समयमा सायद यो नयाँ नक्सा थियो, धेरै घोषणा गर्न नेतृत्व ओएस कि - iOS को इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो। तथापि, कसैको लागि आफ्नो सेवा को आश्चर्य तिरस्कार बन्न छैन: यी प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु, र एप्पल नै आफ्नो प्रतियोगिहरु गर्न कम्तीमा केही सहायता प्रदान गर्ने झुकाव देख्न गरिएको कहिल्यै छ।
टमटम द्वारा आपूर्ति आधिकारिक नक्सा सेवा गर्न यो दिन जानकारी अब देखि। अन्तमा, कम से कम एक जल घटना भयो, "स्याउ" स्थानीयकृत सामग्री प्रदायकहरू सहयोग गर्न थाले। त्यसैले, यो "Yandex" बाट डाटा पहिलो देखा नक्सा छ। निस्सन्देह, यो परोपकारिता बाहिर छैन गरियो, तर केवल मुनाफा खातिर। उल्लेखनीय कार्ड पहिलो सदिश ओएस को यस संस्करणमा छ थिए भन्ने तथ्यलाई छ।
साथै, त्यहाँ अन्त थियो त लामो लागि पर्याप्त प्रयोगकर्ता जो एक बारी आधारित नेभिगेसन छ। त्यो, प्रसंगवश, पूरै नै सिरी संग एकीकृत छ। उदाहरणका लागि, होने आफ्नो घर को ठेगाना मा पायो, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ (को पाठ्यक्रम, अंग्रेजी मा), वाक्यांश: स्वचालित रूपमा यो अन्त गर्न सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग चयन गर्न कार्यक्रम "घर जाने, गरौं"। बादल डेटा मात्र गतिशील लोड: यो लक्जरी मात्र इन्टरनेटमा धेरै badsome जडान मालिक उपलब्ध, एप्पल गरेको अपेक्षा को चार्ट मा रूपमा सम्भव छैन अफलाइन मोड मा काम गर्न छ भनेर याद गर्न मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं (को ग्यारेन्टी अर्थात्) गुमाउन केही छ र अफलाइन मोडमा सामान्य नक्सा चाहन्छु, तपाईंको सेवा त कुनै पनि अनौपचारिक फर्मवेयर iOS 6, यस्तो सम्भावना अवस्थित जसमा भने।
सञ्चालन प्रणाली, सजिलै देखिने उच्च परिभाषा विस्तार र चित्रकला नक्सा अघिल्लो विज्ञप्ति संग तुलना। Alas, तर "स्याउ" को रूसी प्रशंसक सबैभन्दा साहसी सपना को कार्यान्वयन, यो कहिल्यै आए। हामी पनि हाम्रो देश को सबै भन्दा ठूलो शहर मा घरहरू silhouettes को तीन आयोमी रेखाचित्र बारेमा कुरा गर्दै छन्।
तपाईं भ्वाइस कल गर्दा प्राथमिकता रंग मा अब देखि, को संवाद सेतो भयो। तर, आज हामी यो मामला मा पहिलो र अन्तिम थियो भनेर थाहा: यो हाल संस्करण मा प्रतिस्थापित छ (iOS 8 र 9) इन्द्रेणी "केही"। यो डिजाइन जस्तै कसैले, तर केही छैन। उपलब्ध उन्नत सुविधाहरू भयो: स्क्रिनमा लामो स्वाइप आगमन कल मात्र कल अस्वीकार वा जवाफ गर्न, तर "संदेश" र "पछि मलाई सम्झाउनुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
ती सेटिङहरू, तपाईंले हटाउन वा द्रुत जवाफ को लागि आफ्नो टेम्प्लेट थप्न वा स्मृति मा अवस्थित वस्तु सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। "आगमन" "एक घण्टा पछि कल" र - तपाईं "पछि कल" चयन भने, त्यसपछि स्क्रिन दुई विकल्प प्रदर्शित हुनेछ। धेरै अनुरोध कारण प्रयोगकर्ता मोड प्रविष्ट पनि "छैन बाधा गर्छन्", र यो सक्रिय हुन सक्दैन दुवै स्वयं र स्वचालित मोड, एक predetermined समय अन्तराल मा। यो अवधिमा सबै सूचनाहरू र आगमन कल पूर्ण रूपमा noiseless छन् र आफ्नो छुट्टी तोड्न छैन वा कामबाट विचलित छैन।
उन्नत सेटिङ मोड, "बाधा नगर्नुहोस्"
यो कसको कुनै पनि समयमा कल र कुनै पनि शासनमा छैन उपेक्षा गरिनेछ यी सेटिङहरूमा, तपाईं ती सदस्यहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाह उपयोगी छ। तपाईं (जस्तै, प्रति मिनेट तीन चार कल) कल पनि सामान्य मोडमा हस्तान्तरण गर्दै एक निश्चित बाहुल्य सेट गर्दा: साथै, तपाईं साँच्चै आवश्यक छ कि ती मानिसहरूलाई "एक मौका दिन" मौका छ।
त्यसैले, यस्तो उपयोगी मोड को सेटिंग मा केही मिनेट खर्च, तपाईं राति डर बिना नियमित एसएमएस विज्ञापन वा अनावश्यक कल देखि उठ्नु सुत्न सक्नुहुन्छ। मामला मा, तपाईं साँच्चै कसैले पनि यस्तो लेट समयमा आवश्यक छ भने, यो व्यक्ति अझै पनि उहाँलाई, मार्फत प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ र अलिकति बढी समय खर्च गर्न हुनेछ।
वास्तविक समयमा भिडियो सम्मेलन
नयाँ iOS 8 रूपमा, भिडियो सम्मेलन, मात्र छैन "अभाव» वाइफाइ, तर पनि पारंपरिक सेलुलर नेटवर्क प्रयोग मार्फत हुन सक्छ। यसरी स्याउ आफ्नो अपरेटर यो सेवाको लागि पैसा को एक निश्चित रकम तपाईंको खाताबाट झिक्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिन्छ। हामी हाम्रो अवस्थामा, यो सुविधा तपाईं इन्टरनेट को एक सभ्य प्याकेज प्रदान राम्रो महसुल योजना जोडिएको भने मात्र छन् आफ्नो बजेट बर्बाद छैन भनेर याद गर्नुहोस्। विदेश, केही संचालक आवेदन "भिडियो सम्मेलन" को प्रयोग गरेर iPhone मा iOS6देखि असीमित डाटा च्यानलमा पहुँच छ, अलिकति थप मानव थिए।
अन्य सेवाहरू र आवेदन संग एकीकरण
छ कि अर्को लामो-प्रतीक्षा विकल्प - सबै सम्भव पहिचानकर्तालाई पूरा एकीकरण। आइओएस6आवेदन, तपाईं एप्पल कुनै पनि प्रयोगकर्ता उपकरणमा आगमन आवाज कल प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ देखि कि आईप्याड वा म्याक यो छ। यो नवीनता गरे जीवन जो सधैं लागि कहीं zapropastilsya फोन देख, काम बाट विचलित हुन सक्दैन सम्पर्क लामो सूची, सजिलो ठूलो मिलनसार प्रयोगकर्ताहरू। तपाईं कम्तिमा केही "स्याउ" ग्याजेट छ नजिकै भने, त्यसपछि यो समस्या हुन ceases।
लामो "समाजवाद" को विजय बाँच्न!
अब यसलाई साधारण छ, तर सीधा स्वर्गबाट एउटा उपहार रूपमा कथित को "छ" सामान्य Facebook संग एकीकरण को दिन मा। एउटै ट्विटर संग अवस्था बारे भने गर्न सकिन्छ: तपाईं बस जो समर्थन यो सुविधा स्वचालित रूपमा सामाजिक सञ्जाल तपाईंका साथीहरूको साथ अनुभव साझेदारी गर्न सक्षम छ iOS को लागि सबै कार्यक्रम, गर्न उपयुक्त सेटिङ यी सेवाहरूबाट आफ्नो पहिचान डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यो भन्दा मिलनसार प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै सुविधाजनक छ।
एकै समयमा सबै आवश्यक उपकरण जो आइओएस लागि आफ्नो कार्यक्रम यी कार्यहरु सबै कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ विकासकर्ताहरूले लागि प्रदान गरेका थिए। अन्तमा, अझ सुविधाजनक छ के, प्रणाली स्वचालित रूपमा सिङ्क्रोनाइज र तपाईं तुरुन्त क्यालेन्डर र कार्य अनुसूचक मा बिदा र जन्मदिनको मिति बनाउन अनुमति दिने, तपाईंको फोन मा नै सम्पर्क संग सामाजिक सञ्जाल तपाईंका साथीहरूको सूची तुलना। त्यसैले उहाँको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना आफ्नो comrade प्रत्येक बधाई गर्न नबिर्स! अन्तमा, सबै आवेदन ती कार्यक्रम तपाईं आफ्नो ध्यान लायक विचारमा बारेमा सबै मेरा साथीहरू सूचित भन्ने "लाइक" को लागि प्रमुख पसलहरु थिए।
अर्को महत्त्वपूर्ण नवीनता साधारण photostreams छ। तपाईंले एक वा बढी आफ्नो मित्र को पहुँच तिनीहरूलाई थप्दा, तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ। आफ्नो मित्र पनि एप्पल देखि ओएस चलान उपकरणहरू छन् भने, तिनीहरू तत्काल तस्वीर प्राप्त गर्नेछ। छैन भने, त्यसपछि तिनीहरूले नव अपलोड फोटो मा हुलाक कार्यालय आउन तपाईंले कुनै पनि आधुनिक ब्राउजर मार्फत अवलोकन गर्न सकिन्छ नोटिस। यी सबै तस्बिरहरू iCloud लिन छैन अप डिस्क ठाउँ, तर तपाईं फोटोहरू एक वस्तुतः असीमित नम्बरमा प्रवाहको कुनै पनि नम्बर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ किनभने। आफ्नो मित्र मात्र "laykat" सबैभन्दा मन पराएका चित्र, तर तुरुन्तै तिनीहरूलाई टिप्पणी हुनेछ।
मेल र ब्राउजर
Oddly पर्याप्त, तर केवल ओएस प्रयोगकर्ताहरूको छैटौं संस्करणमा अन्तमा आफ्नो सबै उपकरणहरूमा समिकरण आफ्नो पुस्तक चिन्हहरू पूरा गर्न मौका पाएका थिए। तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, यो व्यापार, "स्याउ" बादल लागि जिम्मेवार छ। अब देखि, तपाईँले जहाँ तपाईं कुनै पनि अन्य एप्पल उपकरण प्रयोग गर्नु अघि बन्द बाँकी समय चाँडै पढेर जारी राख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले पठनीय भनेर पनि इन्टरनेट जडान गर्न आवश्यक छैन, प्रत्येक सेटिङ पृष्ठ क्लाउडमा भण्डारण सकिन्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो अवस्थामा, यो एकदमै महत्वपूर्ण छ। बस किनभने यो एक समयमा सायद धेरै प्रयोगकर्ताहरू र iOS6अपडेट यो सबै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी नवीनता छैन देखि, साँच्चै यो मूल्य प्रणाली स्विच गर्न चाहन्छु।
त्यो धेरै राम्रो ब्राउजर "सफारी" अन्तमा राम्ररी उपकरणको तेर्सो अभिमुखीकरण लागि पृष्ठ व्यवस्था कसरी सिके छ। यो गर्न, उपकरणपट्टीमा, बस तल बटन क्लिक गर्नुहोस्। मेल वीआईपी वाहेक, तपाईं मात्र फरक मेलबक्सहरू आफ्नो सबै मेल सङ्कलन गर्न सक्षम हुने छैन जो धन्यवाद प्राप्त हुनेछ, तर पनि अलग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य सन्देश चिनो। निस्सन्देह, छुट्टै प्रत्येक बक्स लागि "uchetki" सिर्जना को संभावना छ।
महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिए र सबै पसलहरूमा। पहिलो, तिनीहरूले अझ सुखद र सुन्दर इन्टरफेस पायो। निस्सन्देह, इन्टरफेस पनि गम्भीर reworked गरिएको छ किनभने सबै रंग, सीमित छैन परिवर्तन। विशेष, त्यहाँ थप तार्किक आवेदन विभाजन थिए, र प्रत्येक यसको आफ्नै स्क्रल पट्टी, जब पसलमा काम निकै सुविधाको होइन्छ जो छ।
समयमा, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो पूर्ण पनि jailbroken iOS 6, तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम र सामान्य स्रोतहरू प्रयोग गर्न सक्षम हुन भने मात्र, हुनत यो दृष्टिकोण निकै उपकरणको सुरक्षा कम मूल्यांकन छैन, र। तथापि, एप्पल उपकरणहरू देखि फर्मवेयर गर्न, हामी कुनै पनि ग्यारेन्टी र अधिकार सेवा केन्द्र बारेमा भूल हुनेछ तिमी सिर्फ यो मामला मा जस्तै, छैन सिफारिस।
मोबाइल "स्याउ" प्रणाली इकोसिस्टमका विकास मा "छ" को महत्त्व अत्यन्तै उच्च छ। उनको मामला मा पछिल्लो डिजाइन मा skveformizm प्रयोग, अनुकूलन को Forefront मा राख्नु भएको छ। यो पनि एक minimalist डिजाइन मा आधारित छ सबै आधुनिक मोबाइल ओएस कम्पनी,।
कसरी एक गैर मानक पीसी मा BIOS खोल्न
जो चालक आवश्यक तपाईंले कसरी थाहा छ?
किबोर्ड "कुकुर" टाइप गर्न कसरी तीन सरल तरिका
कसरी विन्डोज एक डिस्क विभाजन गर्न 7
डिस्क कसरी defragment गर्न, र आफ्नो पीसी गति अप
मा ब्याट्री छोराछोरीको एटीवी। र मूल्यहरू
पाइप को पर्खाल गर्न मिलाउँदै। तरिकामा माउन्ट। क्ल्याम्प, कोष्ठक, ब्रेसहरू
पनीर संग Puffs
Ageratum नीलो मिंक: रोपेको र खेती
चलचित्र "128 दिल धड्कन प्रति मिनेट": समीक्षा
चैनल5- इत्र को दुनिया को एक सुन्दर लिजेन्ड
B25 (ठोस): विशेषताहरु र प्रयोग
सिरका संग पोर्क: नुस्खा
"सागर लहर" (शिविरमा): समीक्षा। Tuapse - छोराछोरीको बाँकी। "सागर लहर" - शिविरमा, Tuapse